Umkhiqizi Nomhlinzeki Wezimoto Osebenza Kakhulu waseChina | I-Daxin
Ukuphakama kweMax Platform: 10m-26m
Amandla Ibanga: 200kg
Amandla we-Crane: 1000kg
Isikhathi sewaranti sezinyanga eziyi-12 ngezingxenye zokungcebeleka zamahhala
Izimoto ezisebenza ezindaweni eziphakeme kakhulu zisetshenziswa kakhulu ezindaweni eziphakeme ezifana nogesi, amalambu emigwaqo, ukuphathwa kukamasipala, izingadi, ezokuxhumana, izikhumulo zezindiza, ukwakhiwa kwemikhumbi (ukulungisa), ezokuthutha, ukukhangisa kanye nezithombe. Ukuze unikeze ukwesekwa kokusebenza kwemikhakha eminingi, inkampani yethu nayo ine- izimoto ezikhethekile yemisebenzi yokulwa nomlilo. Ipulatifomu yasemoyeni inesiteshi sokumpompa esisezingeni eliphezulu esenza inqubo yokuphakamisa izinze kakhudlwana, futhi ngasikhathi sinye inamandla aqinile okunqoba izithiyo. Uma unendawo yokusebenza encane, sinenye enyeimikhiqizo ongakhetha kuzo. Ngicela ungithumele uphenyo ngokushesha nje lapho ukhetha okokusebenza okulungile, futhi ngizokunikeza imininingwane eningiliziwe.
Q: Ingabe kulula ukushintshanisa ingalo yokusonga ngesikhathi sokusebenza?
Iloli lokuphakama okuphezulu line-turntable ekwazi ukuzungeza i-360 °, yamukele isakhiwo se-turbine deceleration nge-lubrication nemisebenzi yokuzikhiya, futhi isikhundla se-bolt singalungiswa kalula ukufeza umphumela oyifunayo.
Q: Ngingafunda kanjani okwengeziwe ngemininingwane?
A: Ungachofoza i-imeyili ekhasini eliyisiqalo lomkhiqizo ukuthumela i-imeyili ngqo kithi, noma ungachofoza u- "Xhumana Nathi" kuwebhusayithi ukuze uthole imininingwane engaphezulu yokuxhumana, bese ukhetha indlela othanda ukusithinta ngayo ukuthola imininingwane yomkhiqizo.
Q: Kuthiwani ngentengo yemikhiqizo yakho?
A: Ifektri yethu isungule imigqa eminingi yokukhiqiza, engakwazi ukwenza umkhiqizo omkhulukazi owenzelwe ukunciphisa izindleko zethu zokukhiqiza, ngakho-ke intengo yethu inenzuzo enkulu.
Q: Ingabe ikhwalithi yemikhiqizo yakho ithembekile?
A: Imikhiqizo yethu isidlulile isitifiketi se-EU, futhi ikhwalithi ingathenjwa ngokuphelele.
Ikhasimende lethu laseJalimane linenkampani yalo yokuqashisa futhi lithenge imoto yethu ephezulu yokuqasha imoto. Ngokuxhumana, usitshele ukuthi ukuqashwa kwamaloli asemsebenzini kuyathandwa kakhulu ngoba kulula kakhulu ukuthuthela ezindaweni ezahlukahlukene zokusebenza. Amakhasimende ayo ayithanda kakhulu le mishini, futhi wanquma ukuthenga enye. Usitshele ukuthi bajwayele ukusebenzisa izimoto eziphakeme kakhulu ukulungisa nokunakekela ezinye izakhiwo zangaphandle. Lapho ethenga imikhiqizo yethu futhi, sinezaphulelo kubangani bethu bakudala, ngethemba lokuthi inkampani yakhe yokuqashisa ingathandwa ngamakhasimende amaningi.
Elinye lamakhasimende ethu eDubai selithenge i-Aerial work Truck yethu ezosetshenziswa emotweni scrapyard ukuhambisa izimoto ezilahlekile. Selokhu basebenzise leli loli lomsebenzi, sebenendawo enkulu egcekeni elishiyiwe. Usebenzise le mishini ukubeka kahle izimoto ezisetshenzisiwe. Ukuphakama kokustaka ngokusobala kuphakeme kakhulu kunakuqala, futhi nomsebenzi wabasebenzi bakhe nawo ulula kakhulu. Sijabule ngempela ukuzwa ukuthi imishini yethu iyenza ibe lula kakhulu.
Ukuphakama Kwepulatifomu (m)
Amandla wePlatform (kg)
0-2r / iminithi
1-2r / iminithi
Ukuphakama kweMax Hook (m)
I-engela Yokujikeleza (°)
I-360 yomabili futhi iyaqhubeka
Amandla Wengwegwe (kg)
Itafula lokujikeleza / Ipulatifomu
Isisindo Somgwaqo (kg)
Usayizi sekukonke (mm)
Isisekelo Samasondo (mm)
I-SD4D / D28D11
Ingxenye #: SD4D25R / D28D11
Amandla / Amandla / HP (kw / ml / hp)
I-CHINA V Izinga Lokukhishwa
Isivinini esikhulu (km / h)
Oluvala amasondo Ubuningi
Oluvala amasondo Amandla (kg)
Ubude be-Overhang (mm)
I-Angle Yesifundo (°)
Langaphambilini I-trailer yamahhashi
Olandelayo: I-Foam Fire Fighting Truck
Isisekelo sokuqina se-1.Good ku-H type outrigger kanye ne-suit yanoma iyiphi indawo yokusebenza enomusa.
Isiteshi sempompo esezingeni eliphakeme se-2.lenza siphakamise futhi siwe kahle.
Idizayini yesikisi se-Anti-pinch; indawo ephambili ye-pin-roll isebenzisa ukwakheka kokuziqinisa okwelula isikhathi sokuphila.
I-4.Equipped nge-Integrated electronic control valve block izuza ukusebenza okulula.
5.Pressure impumuzo valve ukuvimbela ukusebenza ngokweqile; I-valve yokulawula ukugeleza yenza isivinini sokwehla siguquke.
I-6.Explosion-proof valve ima ipulatifomu yehla ngokushesha lapho kuqhuma ipayipi.
7.Up to American standard ANSI / ASME and Europe standard EN1570
1, I-boom nemilenze yenziwa ngamaphrofayli we-alloy low Q345, azungezwe i-weld, ukubukeka okuhle, amandla, amandla aphakeme;
2, ukuzinza kwe-H-leg, imilenze ingaqhutshwa ngasikhathi sinye noma ngokwehlukana, ukusebenza okuguqukayo, kungazivumelanisa nezimo ezahlukahlukene;
3, Slewing mshini kuyinto adjustable, kulula ukuzivumelanisa;
I-4, indlela ejikelezayo yokujikeleza itafula elingu-360 °, ukusetshenziswa kwensimbi yokuthuthuka kwe-worm gear (nge-self-lubricating and self-locking function), ukulungiswa kwangemuva nakho kungashintsha kalula isikhundla se-bolt ukufeza kalula umphumela oyifunayo;
5, Ukusebenza kwemoto kusetshenziswa imodi ehlanganisiwe yokulawula i-valve block, ukwakheka okuhle, ukusebenza okuzinzile, ukugcinwa okulula;
6, Yehla futhi ungene emotweni, ukusebenza okuphephile nokwethembekile;
I-7, Ukusebenza kwemoto nge-valve mpintsha ukufeza isivinini seSithembiso;
I-8, Ipulatifomu yomsebenzi isebenzisa ukulinganisa kwemishini, ezinzile futhi ethembekile;
9, Turntable nobhasikidi ne isiqalo stop stop, kulula ukusebenza, longa uphethiloli
1. Amaphayiphu okuqinisekisa ukuqhuma
2. I-valve ye-Spillover
3. I-valve yokwehla okuphuthumayo
4.Idivayisi yokuvikela ukukhiya ngokweqile.
5. I-valve yokwehla okuphuthumayo
6.Idivayisi yokuvala okokuvikela ngokweqile.
Imodeli efaneleke kakhulu izonconywa kuwe uma sesazi ngemfuneko yakho.
2.Ukuthunyelwa kungahlelwa kusuka ethekwini lethu kuya echwebeni oya kulo.
Ividiyo ye-3.Opetion ingathunyelwa kuwe uma kudingeka.
Ividiyo engu-4 yesondlo izonikezwa uma isikisi esizisusayo siphakamisa ipulatifomu ukukusiza ukuthi ulungise.
Izingxenye zeloli zingathunyelwa kuwe ngokuzwakalisa zingakapheli izinsuku eziyi-7 uma kudingeka.
Intengo yeloli yezinyoni zasemoyeni
Intengo yeloli yasemoyeni
Intengo Yeloli Lokusebenza Lasemoyeni
Intengo yeBucket Truck
Iloli Lokusebenza Eliphezulu Eliphezulu
Intengo Yezimoto Zokusebenza Eziphezulu
Intengo ye-Operation Vehicle
Intengo Special Truck